့ (၈၈) အရေးအခင်း ရဲ့ နှစ်ပေါင်း(၃၃)နှစ်ပြည့် တဲ့ နေ့မှာ သူလေးစားရတဲ့ သူတွေကို ပေါ်တင်ချပြ လိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်း – Shwe Yoe
ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းမော်ကွန်း က တော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာရော နှင်းဆီအငြိမ့်မှာရော အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်းကတော့ အနုပညာ မှာလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်ကနေ သရုပ်ဆောင်နိုင်သလို အနုပညာသက်တမ်း တစ်လျှောက်မှာလည်း နာမည်ပျက်မရှိအောင် နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကမှာလည်း ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဇင်ဝိုင်း ကိုလည်း လူတိုင်းကလေးစားအားကျရသလို သားဖြစ်သူ မင်းမော်ကွန်းကလည်း အမှန်တရားဘက်ကို ရဲရဲဝင့်ဝင့်နေရဲသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်.။ ပြည်သူတွေရဲ့အတူ ခံစားချက်တွေထပ်တူကျခဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင် ဖခင်ဖြစ်သူ အဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာလည်း နောက်ဆုတ်မသွားတဲ့ အပြင်ရှေ့ကိုသာဆက်လက်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။
အဖေဖြစ်သူရော သားဖြစ် သူပါ ရဲရင့်ပြတ်သားစွာ ရှိနေခဲ့ကြလို့လည်း ပြည်သူတွေလည်း အားအင်တွေအပြည့်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်. မင်းသားမင်းမော်ကွန်းကတော့ လူကိုယ် တိုင်လည်း ပါဝင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီး လူများနည်းတူ လူမှု့ကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်ကနေလည်း ဆက်လက်ပြီးတော်လှန်နေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်.။နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခံဝန်ကတိ ထိုးဖို့တွန်းအားပေးခံခဲ့ရပေမယ့် နောက်မဆုတ်ဘဲ ပန်းတိုင်ကို မရောက်ရောက်အောင် လျှောက်လှမ်းနေဆဲပါပဲနော်။တော်လှန်ရေးအတွက် အုတ်တစ်ချက် သဲတစ်ပွင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းဟာလောလောဆယ်မှာလွတ်မြောက်နယ်မြေ တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့လည်း သိရှိရပြီး သူကတော့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီး အာဏာရှင်ကို တွန်းလှန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ၈၈ ရဲ့အရေးအခင်း နှစ်ပေါင်း ၃၃ နှစ်ပြည်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် နေရာကွက်ကြား မှာ ပြည်သူတွေကဆန္ဒတွေဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်. ဒါ့ကြောင့်လည်း မင်းမော်ကွန်းက ” ၈၈၈၈မှ၈၈၂၁ထိသူရဲကောင်းအားလုံးကိုလေးစားပါသည် ” ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။မင်းမော်ကွန်းရေးသားထားတဲ့ ပို့စ်အောက်မှာလည်း အားပေးစကားများနဲ့အတူ ရေးသားပြီးအားပေးထားကြပါတယ်။ ဒီသတင်းလေးကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
ပရိသတျအခဈြတျော မငျးမျောကှနျး က တော့ ရုပျရှငျဇာတျလမျးတှမှောရော နှငျးဆီအငွိမျ့မှာရော အောငျမွငျခဲ့တာကွောငျ့ ပွညျသူတှရေဲ့အခဈြတှကေို သိမျးပိုကျထားနိုငျသူဖွဈပါတယျ။မငျးမျောကှနျးကတော့ အနုပညာ မှာလညျး ကရြာဇာတျရုပျကနေ သရုပျဆောငျနိုငျသလို အနုပညာသကျတမျး တဈလြှောကျမှာလညျး နာမညျပကျြမရှိအောငျ နထေိုငျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ အနုပညာလောကမှာလညျး ဖခငျဖွဈသူ ဦးဇငျဝိုငျး ကိုလညျး လူတိုငျးကလေးစားအားကရြသလို သားဖွဈသူ မငျးမျောကှနျးကလညျး အမှနျတရားဘကျကို ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့နရေဲသူလညျး ဖွဈပါတယျ.။ ပွညျသူတှရေဲ့အတူ ခံစားခကျြတှထေပျတူကခြဲ့သူဖွဈတဲ့အပွငျ ဖခငျဖွဈသူ အဖမျးခံရတဲ့အခါမှာလညျး နောကျဆုတျမသှားတဲ့ အပွငျရှကေို့သာဆကျလကျရပျတညျခဲ့ပါတယျ။
အဖဖွေဈသူရော သားဖွဈ သူပါ ရဲရငျ့ပွတျသားစှာ ရှိနခေဲ့ကွလို့လညျး ပွညျသူတှလေညျး အားအငျတှအေပွညျ့ရှိခဲ့တယျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူးနျော. မငျးသားမငျးမျောကှနျးကတော့ လူကိုယျ တိုငျလညျး ပါဝငျဆန်ဒထုတျဖျောခဲ့ပွီး လူမြားနညျးတူ လူမှု့ကှနျယကျစာမကျြနှာထကျကနလေညျး ဆကျလကျပွီးတျောလှနျနဆေဲပဲ ဖွဈပါတယျ.။နညျးမြိုးစုံဖွငျ့ ခံဝနျကတိ ထိုးဖို့တှနျးအားပေးခံခဲ့ရပမေယျ့ နောကျမဆုတျဘဲ ပနျးတိုငျကို မရောကျရောကျအောငျ လြှောကျလှမျးနဆေဲပါပဲနျော။တျောလှနျရေးအတှကျ အုတျတဈခကျြ သဲတဈပှငျ့ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ မငျးမျောကှနျးဟာလောလောဆယျမှာလှတျမွောကျနယျမွေ တဈခုကိုရောကျရှိနတေယျလို့လညျး သိရှိရပွီး သူကတော့တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနပွေီး အာဏာရှငျကို တှနျးလှနျနတောပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီနေ့ ၈၈ ရဲ့အရေးအခငျး နှဈပေါငျး ၃၃ နှဈပွညျတဲ့နတေ့ဈနဖွေ့ဈတဲ့အတှကျ နရောကှကျကွား မှာ ပွညျသူတှကေဆန်ဒတှဖေျောထုတျခဲ့ကွပါတယျ. ဒါ့ကွောငျ့လညျး မငျးမျောကှနျးက ” ၈၈၈၈မှ၈၈၂၁ထိသူရဲကောငျးအားလုံးကိုလေးစားပါသညျ ” ဆိုပွီးရေးသားထားပါတယျ။မငျးမျောကှနျးရေးသားထားတဲ့ ပို့ဈအောကျမှာလညျး အားပေးစကားမြားနဲ့အတူ ရေးသားပွီးအားပေးထားကွပါတယျ။ ဒီသတငျးလေးကို ပရိသတျကွီးအတှကျ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော…
အဆိုတော်ရေမွန်မကျွတ်လွတ်သေးဘူး ဆို တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောပြလာ တဲ့ လပြည့်ကဗျာ
စကစ က ဒါရိုက်တာဝိုင်းကို ဖမ်းစီးအောင် သတင်းပေးတဲ့ နောက်ကွယ် က သတင်းပေး တဲ့ ဒလန် မှာ နာမည်ကြီး ဆယ်လီတစ်ဦး ဖြစ်နေ
အလှတရားတွေကို အထင်သားမြင်တွေရမယ် မော်ဒယ် စုမြတ်ဖူး ရဲ့ ပုံရိပ်များ